China JY-2125 Defoamer Paper Industry ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | Juyou
mmiri rọba silicone
silicone emulsion usoro
silicone ọmụmụ usoro
Silicone akpụkpọ anụ
Agen na-enye ọkwa silikoni
ndị enyemaka maka ọrụ ugbo
Onye nnọchi anya defoamer
Silicone wetting gị n'ụlọnga
Ụlọ ọrụ ugbo
Ụlọ ọrụ simenti
Ụlọ ọrụ nhicha
Ihe mkpuchi, eserese & ụlọ ọrụ ink
Ụlọ ọrụ gbaa ụka
Ụlọ ọrụ gas na mmanụ
Onye na -eme akwa
JY-2125 Defoamer Paper Industry
JY-2125 na-emi esịnede hydroxyl compound, synergist, dispersing gị n'ụlọnga na emulsifier. Nwee nkwụsi ike n'oge nchekwa yana arụmọrụ antifoam dị mma. Oke okpomoku ngwa dị n'etiti okpomọkụ ụlọ ruo 60 ℃ mgbe ejiri ya mee akwụkwọ.
JY-2125 na-emi esịnede hydroxyl compound, synergist, dispersing gị n'ụlọnga na emulsifier.
Nwee nkwụsi ike n'oge nchekwa yana arụmọrụ antifoam dị mma.
Oke okpomoku ngwa dị n'etiti okpomọkụ ụlọ ruo 60 ℃ mgbe ejiri ya mee akwụkwọ.
Emulsion mmiri na -acha ọcha ma ọ bụ na -acha odo odo, na -enweghị nsị na adịghị ọcha ọ bụla
Ọdịnaya na -anaghị agbanwe agbanwe (%)
30.0 ± 1.0
Akwụkwọ ngosi pH ziri ezi
Nwalee ihe ọmụmụ mbụ
Mmiri na -agba agba (10 ~ 30 ℃)
Mpempe akwụkwọ / starch slurry / Mbipụta mpekere maka starch / nhicha ụlọ ọrụ / ịdị elu nke elu / nrapado dabeere na mmiri / ọgwụgwọ akwụkwọ na-eme mmiri mkpofu
NXZ-2125 defoamer nwere ike diluted na ndim mmiri. N'ime nsị, ọsọ mkpali dị n'etiti 30 ruo 60 rpm na akwadoro oge mkpali maka ihe karịrị nkeji iri. Biko rịọ ngalaba ọrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ maka usoro mgbaze a kapịrị ọnụ. Ụlọ ọrụ anaghị anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mfu ọ bụla nke onye ahịa nwere ike bute n'ihi ojiji ezighi ezi.
A na -atụ aro na agbakwunyere ngwaahịa ahụ ebe defoamer nwere ike gbasasịa n'ụzọ dị mfe. Usoro ngwa akọwapụtara dị ka ndị a:
Ime akwụkwọ: agbakwunyere ngwaahịa a na -aga n'ihu na tray mmiri ọcha, ọdọ mmiri ọcha ma ọ bụ tank mmiri ọcha. Usoro onunu ogwu bu 150g-300g/tọn akwụkwọ.
Ọgwụgwọ akwụkwọ na -eme mmiri mmiri: a na -etinye ngwaahịa ahụ na ebe a na -etinye afụ. Ọgwụ dị n'etiti 0.5ppm-100ppm.
Mbadamba starch: a na -etinye ngwaahịa ahụ ozugbo na usoro gelatinizing starch. Ọgwụ dị n'etiti 0.1%-0.5%.
Mpempe akwụkwọ maka starch: a na -etinye ngwaahịa ahụ ozugbo na usoro gelatinizing starch. Ọgwụ dị n'etiti 0.1%-0.5%.
Nhicha ụlọ ọrụ: a na -etinye ngwaahịa ahụ n'oge usoro nhicha. Ọgwụ dị n'etiti 0.1%-1%.
Ọdịdị elu: agbakwunyere ngwaahịa ahụ n'oge usoro nkwadebe nke ndị na-ahụ maka ịdị elu, usoro onunu ogwu dị n'etiti 0.01% -0.1% maka ngụkọta nke usoro.
Mmiri dabere na mmiri: A na -agbakwunye ngwaahịa ahụ na nhazi nkwadebe. Usoro onunu a tụrụ aro dị n'etiti 0.1 ruo 0,5% maka ngụkọta nke usoro.
Ọgwụgwọ mmiri jụrụ oyi nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na -ekesa: Na mkpokọta, a na -agbakwunye ngwaahịa ahụ ebe afụ ọnụ na -etinye uche, dị ka ntinye nke tankị ikuku ma ọ bụ ebe mkpofu mmiri na -ekpofu mmiri. Ọgwụ a bụ 0,5 ruo 100 ppm, mana ekwesịrị ibu ụzọ nwalee ọkwa mgbakwunye n'ụlọ nyocha.
Ngwugwu na mbupu
25kg/drum, 120kg/bọket plastik, IBC, iji chekwaa ya na ebe dị jụụ. Iji gbochie ìhè anyanwụ kpọmkwem, ụgbọ njem ngwongwo na-adịghị ize ndụ. Mgbe echekwara n'etiti 5 na 40 ℃ (41-104 ℉) n'ime ihe eji emepe emepe emepe, ngwaahịa a nwere ndụ eji arụ ọrụ ọnwa iri na abụọ site na mgbe emepụtara ya.
Nke gara aga: JY-2050BSN Defoamer Metal Cutting
Osote: Ụlọ ọrụ JY-2510 DefoamerPaper
Defoamer na -eri ihe
Na -agbapụ ndị na -emegharị apịtị
Defoamer Dabere na Mmanụ
Silicone Emulsion Defoamer
ngwaahịa ndị metụtara ya
JY-2020ASN ANTIFOAM AGENT
JY-2056GSN mkpuchi mkpuchi Defoamer, eserese & na ...
JY-2030FTSN Defoamer ụlọ ọrụ gbaa ụka
JY-2800SN DefoamerCement Industry
JY-2101ASN Defoamer Gas na ụlọ ọrụ mmanụ
JY-2013TSN Nkịtị Defoamer
na -ege ntị